irobot अभिलेखागार - स्मार्टमे
ट्याग अभिलेखहरू: ईरोबट
डोम » "Irobot" सँग ट्याग गरिएका प्रविष्टिहरू
iRobot नयाँ Roomba i3 + श्रृंखला परिचय!
पोल्याण्डमा आई-रोबोटको आयातकर्ता र वितरक - डीएलएफ - खाली खाली क्लीनिंग रोबोटको रोम्बा आई + + श्रृंखला सुरू गर्ने घोषणा गर्‍यो। नयाँ मोडेलहरूले आईआरबोट उत्पादन लाइन विस्तार गर्दछ। "सफा गर्न अभिनव दृष्टिकोण सँधै आएको छ र सधै हुनेछ ...
पोल्याण्डमा आधा मिलियन आईरोबटहरू
24 नोभेम्बर 2020
स्मार्ट भ्याकुम क्लीनर, irobot, roomba
विश्वव्यापी रूपमा, सफाई रोबोट साना घरेलु उपकरणहरूको गतिशील रूपमा विकास गर्ने कोटीहरू मध्ये एक हो। ध्रुवहरूले यस प्रवृत्तिलाई अनुसरण गर्दछ, स्वेच्छाले परम्परागत वैक्यूम क्लीनरलाई रोबोटको साथ बदल्छ। IRobot कम्पनी, जसले आयातकर्ता DLF सँगै मिलेर भर्खरै घोषणा गर्यो ...
iRobot iRobot जीनियस प्रस्तुत गर्दछ
26 अगस्ट 2020
ब्रावा, irobot, ईरोबोट प्रतिभा, roomba
iRobot iRobot जीनियस प्लेटफार्म प्रस्तुत गर्दछ। यसले रोम्बा रोबोट र ब्रावा जेट मोपिंग रोबोटहरूको लागि विस्तृत नयाँ श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछ, जुन वाइफाइ मोड्युलले सुसज्जित छ। iRobot जीनियसको मतलब अनुकूलन र अधिक नियन्त्रणको अधिक स्तरहरू ...
iRobot फेरि कलात्मक Roomba देखाउँदै छ। प्रोजेक्ट अन्ना हल्राइभिज x iRobot
21 अगस्ट 2020
कला र प्रविधिको संयोजनलाई निरन्तरता दिदै, iRobot Polska, पोल्याण्डको सबैभन्दा मान्यता प्राप्त चित्रकारहरूको साथ, अन्ना हलाराइभिज x iRobot परियोजना प्रस्तुत गर्दछ। iRobot र DLF - ब्राण्ड को पोलिश वितरक - गत वर्षको अभियान जारी राख्न निर्णय ...
नयाँ रोम्बा 600 श्रृंखला रोबोट!
आईरोबट ब्रान्डको पोलिस अफरमा तीन नयाँ रोम्बा series०० श्रृंखला मोडेलहरू सामेल छन्। तिनीहरूका उन्नत टेक्नोलॉजिकल समाधानहरू शरीरमा लुकेका छन्, जुन आधुनिक शैलीमा डिजाइन गरिएको छ। पोल्याण्डमा आईरोबटले यसको प्रस्तावमा तीन नयाँ मोडलहरू प्रस्तुत गर्दछ ...
"मेरो नाम मोक्सी हो!" पूर्व CTO iRobot को रोबोट
Moxie रोबोट नयाँ Emodied कम्पनी को लागी बनाएको हो। उपकरण बालबालिकाको शिक्षा र विकासमा केन्द्रित छ, र यो सिर्जनालाई मार्गनिर्देशन गर्ने नारा हो: "किनकि नरम सीपहरू आवश्यक सीपहरू हुन्"। मोक्सी रोबोटको लागि बजार प्रविष्टि ...
iRobot ले उनीहरूको पहिलो काट्ने रोबोट रिलिज गर्ने योजना निलम्बित गर्दछ
हसकवर्ना, irobot, रोबोट काट्दै, terra
यदि तपाई आशावादी हुनुहुन्छ कि निकट भविष्यमा तपाईले इरोबटबाट नयाँ रोबोट घाँस काट्ने घाँसको घाँस काट्नुहुनेछ। महामारीको साथमा, iRobot ले यसको भर्खरको प्रीमियरलाई स्थगित गर्दैछ ...
# घर बदल्नुहोस् # सँग घर बन्नुहोस्!
Aqar, स्मार्ट घर, irobot, coronavirus, फिलिप्स, roborock, रोबोट, स्मार्ट घर, Xiaomi
वर्तमान स्थितिमा हामी घरमा धेरै समय खर्च गर्दछौं: हामी टाढाबाट काम गर्छौं, बच्चाहरूसँग खेल्छौं, टिभी हेर्छौं, कुक गर्छौं। यसले हाम्रो स्मार्ट घरमा हामी के गर्न सक्दछौं भनेर विचार गर्न सजिलो बनाउँदछ। आजको लेखमा ...
तपाईंको घरले तपाईंको रोम्बा नियन्त्रण गर्दछ IFTTT मा धन्यवाद
ब्रावा, irobot, roomba
स्मार्ट होमको क्षेत्रमा उपकरणहरू बीच एकीकरण प्रगति र गहिराइमा छ। यसको लागि धन्यबाद, विभिन्न उपकरणहरूले एक अर्कासँग कुरा मात्र गर्न सक्दैन, तर एक अर्कालाई नियन्त्रण पनि गर्दछ। यो विकल्प चाँडै नै उत्पादनहरूमा देखा पर्नेछ ...